Gịnị bụ mmanụ CBD? | Ngwa kacha mma maka 2021 - Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị CBD
Gịnị bụ mmanụ CBD? | Ngwaahịa kacha mma maka 2021
Mmanụ CBD agaghị eme ka ị dị elu
Kedu ụzọ kachasị mma iji were CBD Oil?
Obi abụọ adịghị ya, mmanụ CBD ugbu a bụ otu n'ime ngwaahịa ahụike kacha ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ibi ebe enyerela ya iwu, ị nwere ike nwee mmetụta na CBD yiri ka ọ nọ ebe niile. Companieslọ ọrụ mma na nlekọta anụ ahụ na -enye CBD ihu na ahụ, ebe kọfị na -enye lattes CBD na ndị ọzọ CBD mmanu ahia concoctions, spas na -enye ihu CBD. Na onye ọ bụla yiri ka ọ na -eri nri site na CBD gummies na mmanya CBD.
Mana agbanyeghị na mmanụ CBD fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'ụwa ahụike na ịdị mma, ọtụtụ ndị mmadụ ka na -eche na CBD na -agbagwoju anya, ọkachasị mgbe ha na -achọ ịchọpụta otu esi eji ya nke ọma yana otu esi ahụ na ihe ha na -azụta bụ ziri ezi. Mana ka anyị debe ndekọ ahụ ozugbo maka ihe a nwere ihe nwere ime anwansi.
CBD bụ aha dị mkpirikpi nke cannabidiol, bụ akụrụngwa kemịkalụ dị na osisi Cannabis Sativa. Ihe a bụ ihe na -emekarị, a na -ejikarị ya n'ụdị mmanụ mee ọtụtụ ngwaahịa na -eme ka ahụ nwee ahụ iru ala na udo. Agbanyeghị n'adịghị ka nwa nwanne nna ya, tetrahydrocannabinol (THC), nke bụ isi ihe na -arụ ọrụ na wii wii, CBD anaghị enwe mmụọ.
Mba, ọ gaghị eme ka ị dị elu. Osisi cannabis Sativa nwere ihe dịka 113 cannabinoids. Abụọ dị mkpa karịa bụ CBD na THC. THC bụ ihe na -arụ ọrụ na wii wii, nke na -eme ka ị nwee ọ. N'aka nke ọzọ, CBD bụ akụkụ na-anaghị emetụta mmụọ nke ihe ọkụkụ ahụ, yana ihe nke ahụ pụtara bụ na ị gaghị enwe mmetụta ọupụ ọ bụla na ị gaghị enwe mmetụta na-agbanwe ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ n'ụzọ ọ bụla.
Otú ọ dị, enwere ike ịnwe ihe dị iche na nke a. Ihe dị ka 5% nke ndị ọrụ nwere ike nwee mmetụta ma meghachi omume n'ụzọ na -adịghị mma na CBD. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ otu ndị mmadụ na -emeghachi omume na -adịghị mma maka ihe ndị dị ka acetaminophen ma ọ bụ ibuprofen. Ihe a na -atụ aro bụ na oge ọ bụla ị na -ewere mgbakwunye ọ bụla, gụnyere mmanụ CBD, ị ga -emerịrị ya n'okpuru nlekọta.
Otu ihe dị oke mkpa bụ ijide n'aka na ngwaahịa ụlọ ahịa nke atọ nwalere ngwaahịa ị na-azụta maka mmesi obi ike dị mma. Ị ga -amararịrị na FDA anaghị achịkwa ngwaahịa CBD, yabụ na ọ ga -ekwe omume na ngwaahịa ị zụrụ nwere ike pere mpe ma ọ bụ nwee THC. Delta 8 THC ga -eme ka ị dị elu ma bụrụ nke iwu kwadoro.
Eleghị anya anyị niile anụla okwu "hemp", "wii wii" na "cannabis" metụtara CBD. Mana ihe anyị ga -edo anya bụ na osisi Cannabis Sativa nwere ụdị isi abụọ: wii wii na hemp. Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere CBD, enwere pasent CBD dị elu karịa na hemp, nke n'otu oge ahụ nwere oke THC dị ala (erughị 0.3%). Agbanyeghị, mgbe anyị nụrụ banyere mmanụ hemp, ọ na -ezo aka na mmanụ amịpụtara na mkpụrụ hemp. Hemp mmanụ enweghị cannabinoids. Agbanyeghị, mmanụ hemp juputara na abụba dị mma, a na -ejikarị ya eme ihe maka nlekọta anụ ahụ, n'ihi uru ya na -ekpo mmiri.
Nke ahụ bụ ihe dabere n'ezie n'ihe ịchọrọ inweta n'aka CBD yana ihe ị na -ewere ya.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị achọghị iji ọnụ were ya, yabụ na ha ga -ahọrọ CBD isiokwu, n'ụdị ude ma ọ bụ ude. Enwere ike itinye ya na akpụkpọ ahụ wee nweta ahụ efe na akwara, nkwonkwo na akwara.
I nwekwara ike vape mmanụ CBD, nke na -arụpụta ngwa ngwa, mana nke kacha adịte aka. A ga -ewepụta nsonaazụ ya site na vapị n'ime nkeji iri, mana ọ ga -akwụsị ihe dị ka elekere abụọ.
Ọ bụrụ na ọ dị gị mma iji ọnụ kwuo mmanụ CBD, ị nwere nhọrọ nke tinctures na nri. Ha na -ewe ntakịrị oge ịrụ ọrụ (ihe karịrị ọkara otu elekere) mana nsonaazụ ya na -ewe awa anọ ma ọ bụ ise. Tincture bụ mmiri mmiri ma tinye ya n'okpuru ire gị. Ọ bụrụ na ịmasị ụtọ ahụ, n'agbanyeghị, ị nwere ike họrọ nri dịka gummy, capsule, ma ọ bụ ngwaahịa achịcha dị ka kuki ma ọ bụ brownies. Kedu ụzọ ọ bụla, ị ga -enweta ọmarịcha uru nke CBD.
PreviousPrevious post:CBD na Ọrịa shuga - Iji Mmanụ CBD mee ka ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị n'ọbara | Ngwa kacha mma 2021OsoteNext post:CBD na Ahụike